चार दिनसम्म मोडेल अस्पतालमा उपचार गरेपछि उहाँलाई ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो । बुढाथोकी पित्तथैलीमा पत्थरी परेको र त्यसबाट पित्तथैली र पित्तथैलीको नली कुहिएर फुटेको तथा त्यो पत्थर सानो आन्द्रामा गएर आन्द्रालाई समेत असर पुर्‍याएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । पत्थरीका कारण उहाँमा जन्डिसको समेत विमारी देखा परेको छ । माघ २२ गते मेडिसिटी अस्पतालमा डा. सुशील शर्मा ढकालको टिमले बुढाथोकीको अप्रेसन गरी उक्त पत्थरहरू निकाल्ने कार्य भएको छ । अझै केही हप्ता अस्पतालमै उपचारार्थ रहनु पर्ने अस्पताल सूत्रले बताएको छ ।
उपचारका लागि खर्च धेरै आउने भएकाले अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनका उपाध्यक्ष कुल बहादुर थापाको नाममा रहेको एभरेस्ट बैङ्क लिमिटेडको खाना नं. ०१६००५०१२०४४८५ मा सहयोग रकम सङ्कलन गर्ने अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले जनाएको छ । जनजाति सम्मेलनले बुढाथोकीको उपचारार्थ सहयोग गर्न सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।